Myanmar: Guarantee the Right to Free Expression in the Constitution | Human Rights Watch
April 11, 2019 9:32AM EDT
We welcome the government’s creation of the Constitutional Amendment Committee, established to review and propose amendments that will support Myanmar’s transition to democracy.
Myanmar’s 2008 Constitution does not include the guarantees required inademocracy to protect freedom of expression. Those that it does include do not meet relevant international human rights standards. This threatens the transition to and quality of Myanmar’s democracy as can be seen for example in the wide range of laws used to prosecute journalists and human rights defenders.
We are committed to supporting Myanmar’s transition to democracy and would be happy to provide further information and guidance as the Committee conducts its review.
Myanmar Journalists’ Union (MJU)
Myanmar Media Lawyers’ Network (MMLN)
ရွှေခြံမြေကွန်ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်၊ ချောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
အလုပ်သမားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအသိပညာပေးရေး ပဲခူးကွန်ရက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကွန်ရက်၊ မြစ်ကျိုးတိုက်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
ဥသျှစ်ပင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
တောင်သူလယ်သမားများဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ရက် (PLAN-A)၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
မွန်လူငယ်ကွန်ရက်၊ ရေးလမိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်။
လူမူဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
Ramkhye - ရမ်းခေး မြစ်ကြီးနား ကွန်ရက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်။
Justice Drum ကွန်ရက်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။
ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (Area Peace and Development Forward ) ကလေး မြို့နယ်၊ ကလေး ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
ဒို့လယ်ယာ ကွန်ရက်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။
January 31, 2019 News Release